यस्ता अवस्थाका व्यक्तिले भुलेर पनि नखानुहोस् माछा ! «
Published :7June, 2018 11:40 am
माछामा प्रशस्तै पाइने प्रोटिन र भिटामिन-डी ले हाम्रो मांशपेसीको वृद्धि र विकासमा मद्दत गर्दछ। तथापी, यहि प्रोटिन अधिक हुँदा शरिरको लागि हानिकारक हुन सक्छ।
लण्डनबाट पीएचडी गरेकी भारत भोपालकी डा. गिताञ्जली शर्माले नरिवलको उपयोगिताबारे नयाँ तथ्य सार्वजनिक गरेकी छिन्